Posted by zizawa ⋅ 01/07/2010	⋅ 59 Comments
ဗမာ့စာပေ စကားတွေမှာ မိန်းမတွေကို နှိမ်တဲ့ အရေးအသားတွေကို အစောပိုင်းကလည်း ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ တကယ်တော့ လူရယ်မှ မဟုတ်ဖူး၊ တိရစ္ဆာန်တောင် အမဖြစ်ရင် အထီးလောက် အသုံးမကျဘူးလို့ ယူဆပုံရတယ်။ ကြက်မတွန်လို့ မိုးမလင်းဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ဒါကိုပြနေတယ် ထင်တယ်။ မိန်းမတွေ နှာခေါင်းမပါရင် ဟိုဟာတောင် စားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း ဥပမာတခုအဖြစ်နဲ့ ထည့်ရလိမ့်မယ်။ နောက်တခါ ခလေးအမေချင်းတူတာတောင် သမီးမိန်းခလေး အမေက သားယောက်ျားလေး အမေနဲ့ ကြမ်းတပြေးတဲ ထိုင်လို့မရဘူး။ တချို့ တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်း ဒီလိုဓလေ့တွေ ရှိတာကို သခင်တင်မြရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ် ထက်ကြပ်မကွာမှာလား ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ။ ဗမာပြည်မှာ မိန်းမတွေကို မနှိမ်ပါဘူး၊ ယောက်ျားတွေနဲ့ တန်းတူ အဆင့်အတန်းရပါတယ် ဆိုတဲ့ myth ကိုယုံတဲ့သူတွေက များသောအားဖြင့် ဗမာ့စာပေ၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး သမိုင်းတွေမှာ ထူးထူးချွန်ချွန်အဖြစ်နဲ့ ရှေ့ ထွက်လာတဲ့ မိန်းမတွေကို နမူနာပြကြတယ်။ ဟိုးရှေး ၀ိုင်အမ်ဘီအေ ဦးမေအောင်ရဲ့ သမီး ဒေါ်မြစိန်ကစလို့ ဒေါ်မိမိခိုင်၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ခင်နှင်းယု၊ အင်ဒီပင်းဒင့် ဒေါ်စန်း၊ နောက်ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်၊ ကြည်အေး၊ ဂျူး၊ နောက် နိုင်ငံရေးဘက်မှာဆိုလည်း မဒမ်ကျော်ငြိမ်းတို့၊ မဒမ် သိန်းဖေမြင့်တို့ စတဲ့စတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပြတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမျိုးသမီးတွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့ အချက်က သူတို့ဟာ traditional ဗမာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေအောက်မှာသာ ကြီးပြင်းလာကြသူတွေ မဟုတ်ဖူး။ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေက ဘိုကျောင်းပို့ပြီး ဘိုစာတတ်တဲ့ ဘိုစာဖတ်ကြီးလာတဲ့ မိန်းမတွေ၊ ဖြစ်နေတာတွေ့ရမယ်။ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ အောက်မှသာ ကြီးပြင်း လာတဲ့ မိန်းမတွေဟာ ဒီလို ထိပ်ရောက်လာမလားဆိုတာ မေးစရာပဲ။ ဗမာစာ မတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက ဒီဘိုစာတတ်၊ ဘိုလိုပြောနိုင်တဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အပြောလောက်သာ သိနိုင်တာဖြစ်လေတော့ သူတို့လောက်ကိုကြည့်ပြီး ဗမာ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ခေတ်မှီတယ် ပြောတာဟာ လွဲနေတယ်။ ဒီအသိဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ မပြည့်စုံတဲ့ ကောက်ချက်ကိုပဲ ကိုရွှေဗမာများက သံယောင်လိုက်ကိုးကားတတ်ကြတယ်။
မိန်းမမို့လို့ကို လုပ်ခွင့်မပြုတာ၊ လုပ်ဖို့အားမပေးတာပဲလား။ (၁) ဒါမှမဟုတ် မိန်းမရဲ့particular attributes တွေ၊ မိန်းမတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တယ်လို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေကြောင့် လုပ်ဖို့အားမပေးတာလား (၂) ဆိုတာကို ခွဲကြည့်ရအောင်။ လုပ်ဖို့အားမပေးတာ၊ လုပ်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ စကားကို နည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းရရင် ဒါဟာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် မလုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျားနဲ့တန်းတူ လုပ်နိုင်ပါရက်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြဌာန်း သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် လုပ်ဖို့ ပိတ်ပင်တားဆီးခံရတာ၊ မလုပ်နိုင်တာကို ပြောချင်တာပါ။ ဥပမာ မျက်စိမမြင်တဲ့အတွက် ကားမောင်းဖို့ခွင့်မပြုတာနဲ့ မျက်စိမြင်ရက်နဲ့ ကားမောင်းမှုကို ပိတ်ပင်တာမျိုး။ (၁)ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ မိန်းမမို့လိုကို လုပ်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ outright discrimination ဗြောင်အဆင့်နှိမ့်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာ။ အလားတူ အသားအရောင်ကို လိုက်ပြီး ဗြောင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုး သမိုင်းမှာ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ပဲခူးကလပ်ထဲကို မျက်နှာဖြူ ဥရောပသားတွေပဲ အရက်ဝင်သောက်ခွင့်ရှိတယ်၊ coloured people အရောင်ရှိတဲ့လူကို အရောင်ကိုရှိလို့၊ ဒါမှမဟုတ် မဖြူကိုမဖြူလို့ ၀င်ခွင့်မရှိတာ။ (၂)နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ နည်းနည်းထပ်ပြောဖို့ လိုတယ်။ မိန်းမရဲ့ သဘာဝက xxxxx၊ ဒါ့ကြောင့် yyyyy အလုပ်မျိုးတွေကို လုပ်ဖို့အားမပေးဘူးဆိုပြီး အကြောင်းပြကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့တဲ့ မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့ attributes တွေဟာ သိပ္ပံနည်းမကျဘူး၊ နောက်မှားယွင်းတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒီ attributes တွေကြောင့် မိန်းမတွေကို လုပ်ဖို့အားမပေးတာ၊ လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ပြီး ရုပ်သိမ်းသင့်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဒါဟာ မရိုးသားဘူး။ ဥပမာ ပြောခဲ့သလို မိန်းမတွေ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွှေချခွင့်မရှိဘူး၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းမဟာ ဟိုဘုန်းကြီးတပါး ပြောခဲ့သလို အသည်းငယ်တတ်လို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြရမှာ ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာ သိပ္ပံနည်း မကျဘူးဆိုရင် နောက်မှားနေတယ်ဆိုရင် ဒီလိုဘုရားမှာ မိန်းမရွှေချခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားတာကို ရုတ်သိမ်းပေးသင့်တာပေါ့။ ရွှေတိဂုံဘုရား အထက်ပစ္စယံကို မိန်းမတက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကျတော့ ဘယ်လို အကြောင်းပြမလဲ။ မိန်းမတွေ ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ ရေကူးကန်ထဲဆင်းခွင့်မပြုတာ လျော်ကန် သဘာဝကျပေမယ့် မိန်းမတွေဟာ ရာသီလာတဲ့ သဘာဝ ရှိတာမို့ ရေကူးခွင့် ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မှန်ကန်တယ်လို့ ကနေ့ခေတ်မှာ ဘယ်သူပြောမလဲ။ ခုပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ဘာသာရေးမှာ မိန်းမတွေကို လုပ်ခွင့်ပြုမထား တာတွေဟာ အကြောင်းမဲ့ ပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့ခေတ်သူ့ကာလက အကြောင်း တရားတွေကြောင့် (အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုံခြုံရေး စသဖြင့် မရေမတွက်နိုင်အောင်များတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့်) ပိတ်ပင်ရတာ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ထုတ်ရတာလို့ ဆိုတယ်။ ဒါဆိုရင် ခေတ်ကာလပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကို ပိုတာဝန်ယူနိုင်လာတယ်ဆိုရင် ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို ခေတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် မပြောင့်သင့်ပေဘူးလား။
ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းအရာမျိုး။ ပြောသွားတဲ့ အဆိုတွေ အားလုံးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတင် ဆိုင်ကယ်ကြောင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး၊ အညာက အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်းကို ရောက်သွားတယ်။
Posted by Rita | 01/07/2010, 15:36 Reply to this comment	ကိုဝတုတ် ဆွေးနွေးတဲ့ အချက်အတော်များများကို သဘောတူပါတယ်။
Posted by ပန်ဒိုရာ | 01/07/2010, 16:23 Reply to this comment	ဟုတ်တယ်။ မပန်ဒိုရာပြောတာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေ ကြုံရင် ပြောပြဦးမယ်။
Posted by zizawa | 01/07/2010, 17:09 Reply to this comment	မျှတတယ်ထင်သဗျ။
Posted by WinSg | 01/07/2010, 17:38 Reply to this comment	“အမျိုးသမီးတွေကို empower လုပ်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ တစ်ခုခုမှာ အမျိုးသမီးဦးရေ ဘယ်လောက်ပါရမယ်ဆိုပြီး အရည်အချင်းရှိရှိမရှိရှိ ပေါ်လစီအရ အတင်းထည့်တာမျိုးကျတော့လည်း အကျိုးမများပါဘူး။”
Posted by ပိုင် (Pi) | 01/07/2010, 21:15 Reply to this comment	တဦးချင်းစီ အကြောင်းမပြန်နိုင်ပေမယ့် အားလုံးက ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် မျှမျှတတ ဝေဖန်ပေးသွားကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေကို တယောက်နဲ့ တယောက် မတူသော်ငြားလည်း လေးလေးစားစား သဘောထားပါတယ်။
Posted by zizawa | 01/07/2010, 17:13 Reply to this comment	http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Buddhism
Posted by ပိုင် (Pi) | 01/07/2010, 21:32 Reply to this comment	အကျိုးရှိပါတယ်။ ဖတ်ရတဲ့လူမှာ ဗဟုသုတရော၊ စဉ်းစားစရာပါရတာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းမတွေကို ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုမရှိဘူလားဆိုရင် ရှိတယ်လို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ ဒီကိစ္စက ဝိဝါဒ ကွဲပြားစရာမရှိဘူးလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုကိုလည်း လျော့နည်းအောင်၊ ပပျောက်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်
Posted by ကိုပေါ | 01/07/2010, 23:45 Reply to this comment	ဒီဆောင်းပါးလေးရော၊ ပန်ပန် ပြောပြသွားတာရော သဘောကျမိတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံး တက်ညီ လက်ညီ သဘောထား ပြောင်းဖို့တော့ အချိန်ယူရမှာပါ။ ကိုယ့်တယောက်တည်း သဘောအရဆိုရင်တော့ ယောကျာင်္း မိန်းမ ဆိုတာထက် အရည်အချင်း နဲ့ အားသာချက်ဆိုတာကိုပဲ အလေးအနက် စဉ်းစားမိမှာပါ။ ဥပမာ American Idol မှာ နောက်ဆုံး စကာတင် ၁၂ ယောက် ရွေးတာကို မိန်းမ ၆ယောက်၊ ယောကျာင်္း ၆ယောက် ရွေးတာကြီးကို လုံးလုံး မကြိုက်။ အနုပညာ အရည်အသွေး ပြိုင်တဲ့နေရာကြီးမှာ အရည်အသွေး အားနည်းတဲ့ တယောက်က ဒီ ယောကျာင်္း မိန်းမ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ကျန်ခဲ့မှာကို မကြိုက်ဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက ယောကျာင်္းလေးက ပိုတော်နေရင် ယောကျာင်္း ၇ယောက်၊ မိန်းမ ၅ယောက်ပဲ ဖြစ်စေ လက်ခံရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ယောကျာင်္း မိန်းမ ခွဲတာကို လက်မခံချင်တာပါ။ အရည်အချင်းကိုသာ အဓိက ထားချင်တာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ မတရားတာ၊ မဟုတ်တာ ဆိုရင် မိန်းမ မို့လို့ နှိမ်မယ် မကြံနဲ့ဘဲ။ မိန်းမမို့လို့ဆိုပြီး အထူးအခွင့်အရေးပေး လျှော့ပေးတာလဲ မဟုတ်သေးဘူး။ မိန်းမမို့လို့ စိတ်ပျော့မယ်တော့ မထင်နဲ့၊ အမြင်အရသာ ပျော့ပြောင်းပေမဲ့ သူပုန်စိတ်က ရင်ထဲမှာ အပြည့်ရှိတယ်။
Posted by Moe Cho Thinn | 02/07/2010, 00:02 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စဉ်းစားစရာတွေ ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိန်းမကိစ္စဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ၀င်ပြောမလား မှတ်တယ်။ ကိုယ်က ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုး မဟုတ်လေတော့ သိသလောက်ကလေး ပြောပါရစေ။ လိုတာ ပိုတာ ရှိရင် ထောက်ပြ ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချတာတော့ အစဉ်အလာကြီး ဖြစ်နေသေးတယ်။ “ဟွန့် မိန်းမကြီးကျနေတာပဲ။ ပစိပစပ် များလိုက်တာ၊ အတင်းတုတ်လိုက်တာ” နဲ့ “သူက ယောက်ျားလေးလိုပဲ သတ္တိရှိတယ်။ အားကိုးရတယ်” နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် သိသာတယ်။ လေသံက တခြားစီ။ ဒါက streotyping (လွှမ်းခြုံသတ်မှတ်မှု) နဲ့တော့ ဆိုင်တယ်။ သို့သော် ဒီစကားမျိုးကို မိန်းမတွေ ကိုယ်တိုင်က လက်ခံပြောဆိုနေခြင်းဟာ မိန်းမဖြစ်ရခြင်းကို (သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်) အထင်မကြီးမှုကို ညွှန်ပြနေတယ်လို့ ထင်မိတာ ကိုယ်တယောက်တည်းတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လာတာ ၂၀ ရာစုကျမှ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်လာတာ။ အင်္ဂလန်မှာတော့ လူလတ်တန်းစား ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက စတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မဲပေးခွင့်ကနေ ပထမလှိုင်း စခဲ့တယ်လို့ Wiki မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းကတော့ အလုပ်ခွင် လူမှုဝန်းကျင်က ခွဲခြားမှုတွေကို တိုက်ဖျက်ခဲ့တယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေက ဒီကိစ္စကို ၂၁ ရာစုထိ တိတိပပ ထိထိရောက်ရောက် အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးတော့ ဒီနေရာမှာလည်း ရာစုတစု နောက်ကျနေပြန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ “နောက်ကျခြင်းသည် လုံးဝ မဖြစ်ရခြင်းထက် စာလျှင် တော်သေးသည်”လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒါကို အားမလို အားမရ ဖြစ်သူတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါမျိုးက နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်မယ့် ကိစ္စ မဟုတ်လေတော့ ဒီလိုအတွေးအခေါ် အပြုအမူ ပြောင်းလဲမှု ရေစီးကြောင်းကို အရှိန်နဲ့ ဆက်စီးနေစေဖို့၊ သို့တည်းမဟုတ် ပိုကျယ်ပြန့် အရှိန်ရလာဖို့ ကိုယ် တတ်နိုင်သလောက် သတိထား ကြိုးစားကြရမယ်လို့ မြင်တယ်။
Pandora ပြောသွားတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ မိန်းမဦးရေ သတ်မှတ်ခန့်ထားခြင်းကတော့ postive discrimination လို့ ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း လုံးဝကောင်းတယ် မဆိုနိုင်ဘူး။ မိန်းမတွေရဲ့ ကြိုးစားချင်စိတ်ကို မသိလိုက် မသိဖာသာ ချိုးနှိမ်ရာရောက်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အင်္ဂလန်မှာတော့ အလုပ်ရှင်တွေဟာ Equal opportunity ဆိုတာကို ဥပဒေကြောင်းအရ လိုက်နာရတယ်။ အရည်အချင်းချင်းတူရင် လူနည်းစုအုပ်စုက လူကို ဦးစားပေးတယ်။ ဥပမာ ရာထူးကြီးအလုပ် ခန့်ထားရေး လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းမှာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ အမှတ်ချင်းတူနေရင် (အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတွေထဲမှာ မိန်းမ နည်းနေသေးရင်) မိန်းမကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခန့်ထားလိုက်တယ်။ အရည်အချင်း ရှိရှိ မရှိရှိ quota နဲ့ ခန့်ထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး မျှတစွာ ခွဲခြားခြင်းလို့ ခေါ်ရင်ရမယ် ထင်တာပဲ။ မိန်းမတွေကို ဘာသာရေးမှာ ခွဲခြားတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တခုတည်းမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အစ္စလာမ်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်၊ ရှေးရိုး ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲတဲ့။ ကိုယ်က ဘိက္ခုနီသာသနာအကြောင်း သေချာ မသိလေတော့ ၀င်မပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာသာရေးကိစ္စဖက် ရောက်သွားရင် မလိုအပ်တဲ့ စွဲချက်တွေ တက်လာပြီး ကိုယ့်မူရင်းစေတနာကို လွှမ်းမိုး၊ လမ်းလွှဲ သွားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိကြောင်း ကိုဝတုတ်ကို မေတ္တာရှေ့ထား သတိစကား ဆိုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
Posted by နုသွဲ့ | 02/07/2010, 00:29 Reply to this comment	ဦးဆုံးဒီပို့စ်အတွက် ကိုဝတုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by KNSL | 02/07/2010, 03:55 Reply to this comment	ကဲ ကိုဝတုတ်၊ ပြောတဲ့အတိုင်း (အဆစ်ပါကလေးကို) ဖြုတ်လိုက်တော့ စကားပြောရတာ နည်းနည်းအဆင်ချောသွားပြီ မဟုတ်လားး-)
Posted by မန်းကိုကို | 02/07/2010, 05:09 Reply to this comment	ခုပြောနေတဲ့ထဲမှာ မပန်ဒိုရာ၊ မမိုးချိုသင်းနဲ့ နောက်ပိုင်တို့ရဲ့ ကွန်မင့်တွေထဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းလောက် ထပ်မန့်ချင်ပါတယ်။ quota ပြည့်အောင် အတင်းလုပ်တဲ့အတွက် စနစ်ကြီးတခုလုံးအတွက် ခရီးမတွင်တာတို့၊ အလုပ်ဖြစ်သင့်သလောက် မဖြစ်တာတို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တဘက်မှာ perfect meritocracy ဆိုတာကြီးကလည်း perfect society ဖြစ်စေမယ်လို့ အာမမခံနိုင်ပေဘူး။ ပိုင်ပြောခဲ့သလို လူမည်းတွေအားလုံး ရေးတတ်ဖတ်တတ်တဲ့ အဆင့်ထိစောင့်မယ်ဆိုရလို့ အသားအရောင် ခွဲခြားမှုဟာ တကယ်ကို အများကြီး ပိုဆိုးသွားမယ်ဆိုရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တိုးတက်မှုဟာ balanced ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဖူး။ disparities အရမ်းကြီးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကျွန်တော့ တဦးချင်းအနေနဲ့ လက်မခံချင်ဘူး။ ကျွန်တော့လို လက်မခံချင်တဲ့ လူတွေလည်း အများအပြား ရှိမယ်လို့ ယုံတယ်။
Posted by watote | 02/07/2010, 09:49 Reply to this comment	မနုသွဲ့ ပြောလို့ George Elliot အကြောင်းပါ ဥပမာ အဖြစ်ပေးလို့ ကောင်းသွားပြန်ပြီး။ သိုင်းကြူး အမကြီးရေ.. 
Posted by watote | 02/07/2010, 09:57 Reply to this comment	ပို့စ်ကိုရော မှတ်ချက်တွေ အားလုံးကိုပါ ဖတ်သွားပါတယ်။ ဗဟုသုတမျှဝေပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတော့ အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်က ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို ကိုဝတုတ်လောက် မသိတာအမှန်ပဲ။ ဘယ်သူက ဘယ်ကလောင်နဲ့စာ စရေးတယ်ဆိုတာ သိတဲ့အထိ အသေးစိတ်သိအောင် လေ့လာထားတာ ချီးကျူးပါတယ်။
Posted by Nge Naing | 02/07/2010, 11:42 Reply to this comment	အထင်မကြီးနဲ့ မငယ်နိုင်ရေ။ အဲဒိ အချက်တွေကကျွန်တော့်မိန်းမ စာတမ်းထဲကနေ ယူရေးထားတာ။
Posted by zizawa | 02/07/2010, 12:11 Reply to this comment	“Sean Connery ကမိန်းမတယောက်ကို ပါးရိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲချ လိုက်တဲ့အခါ အောက်ကမိန်းမက ပျော့ခွေသွားတဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို သဘောကျတဲ့ မိန်းမတွေ အများစု အဖြစ်ရှိနေရင်တော့ မိန်းမတွေတန်းတူညီမျှရေးဆိုတာ ဝေးနေဦးမှာပဲ။” (ဝတုတ်)
ဒါပေမယ့် ကျောက်ခေတ်က ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမတွေမှာ ယောက်ျားတွေက အမဲလိုက်၊ မိန်းမတွေက ဂူထဲမှာ ကလေးတွေကို နို့တိုက်၊ အသားတွေကို အခြောက်လှန်း၊ ကျပ်တိုက်… စသဖြင့် တာဝန်ခွဲဝေယူကြမယ်လို့ထင်တယ်။ မိန်းမတွေ အမဲလိုက်တာ ယောက်ျားတွေ အမဲလိုက်သလောက် မတွင်ကျယ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူလုပ်တာ ပိုတွင်ကျယ်သလဲ အတိအကျသိရအောင် ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို ကျောက်ခေတ်လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ပေးပြီး အမဲလိုက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပေးရင် ကောင်းမယ်။ ကျနော့်အထင်ကတော့ ခေတ်အခါအလျောက် ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ သင့်ရာ သင့်ရာ တာဝန်ယူကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စိုက်ပျိုးရေးထွန်းကားတဲ့ခေတ်ရောက်ပြန်တော့လည်း ယောက်ျားတွေပဲ လယ်ယာတွေ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဦးဆောင်လုပ်ကြပြန်တယ်။ ဒီဖက်ခေတ်မှာ မိန်းမတွေလည်း ထွန်စက်မောင်းနိုင်ပေမယ့် ထွန်စက်မပေါ်ခင် ခေတ်တုန်းကတော့ ထွန်တုံးအလေးကြီးတွေကို ကိုင်တွယ်ရတာတွေ၊ ကောက်လှိုင်းထုံးအလေးကြီးတွေကို မရတာတွေ စတာတွေကို ထည့်တွက်လိုက်ရင် မိန်းမတွေနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ သိပ်ပြီး Efficient မဖြစ်လို့ မိန်းမတွေက အိမ်မှာနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည်ခေတ်က မိန်းမတွေက (မျက်စိပွင့်နေကြရင်တောင်) တန်းတူအခွင့်အရေးရရေးကို တောင်းကြပါ့မလားလို့ စဉ်းစားစရာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို မိန်းမတွေ အိမ်မှာနေပြီး ယောက်ျားတွေ အလုပ်ထွက်လုပ်ကြရာကစလို့ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေအပေါ် ဝင်ငွေအရ မှီခိုရတယ်၊ မိန်းမတွေ နောက်ရောက်တယ်ဆိုတာ စဖြစ်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတော့ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ စက်ပစ္စည်းတွေ အကူအညီနဲ့ အချို့အလုပ်တွေကို မိန်းမတွေလည်း ယောင်္ကျားတွေနဲ့ တန်းတူရင်ဘောင်တန်းပြီး လုပ်လာနိုင်ကြတယ်။ အဲသည်ကစလို့ နောက်ပိုင်းခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ မိန်းမပါ အလုပ်ထွက်လုပ်မှ ဝင်ငွေလောက်ငှမယ့် ခေတ်မျိုးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါ မိန်းမတွေ အလုပ်လုပ်တာ မဆန်းတဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာတယ်။ စစချင်းမှာ အရင် ယောက်ျားတွေ ကြီးစိုးထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတော့ မိန်းမတွေ စရောက်လာကာစမှာ အထင်သေးတာတို့၊ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတို့တွေ ကြုံရတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ မိန်းမတွေက မိန်းမတွေ တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးကို စတောင်းကြ၊ စတိုက်ကြတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိန်းမတွေ တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးကို မရဘူးဆိုတာ ဒီဖက်ခေတ်ရောက်မှ ခေတ်အလိုက်ဖြစ်လာတာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဟိုးကမ္ဘာအစကနေ စက်မှုမဖွံ့ဖြိုးခင် ခေတ်အထိကတော့ မိန်းမတွေကို နှိမ်လိုလို့ မဟာဖိုဝါဒနဲ့ အထူးတလည် ခွဲခြားတာမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်ချက်အရကို အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းသဘာဝ ကွဲပြားသွားခဲ့တာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဓလေ့ကြီးက ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကျင့်သုံးလာပြီးမှ စက်မှုသိပ္ပံတွေ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတဲ့ ဒီဘက်ခေတ် (ရာစု တခုစာ အချိန်ကလေးရောက်မှ) ဒီအသံတွေ ရုတ်တရက်ကြီး ကျယ်လောင်လာတာဆိုတော့ ခေါက်ရိုးကျိုး အသားသေနေတဲ့ ဓလေ့ကနေ ချက်ချင်းကြီး ကူးပြောင်းကြဖို့ဆိုတာက ကျားတွေရော၊ မတွေပါ လက်တွန့်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ | 02/07/2010, 12:32 Reply to this comment	ကိုပေါက မဆိုင်ဘူးထင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်တယ်ထင်တယ်။ တမင် ဇာတ်နာအောင် လုပ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းသာစရာကောင်းတာကတော့ နောက်ပိုင်း ဂျိမ်း(စ)ဘွန်းကားတွေမှာ ဒီလိုပါးရိုက်တဲ့ ရိုက်ကွက်တွေ မပါတော့တဲ့အပြင် ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း ကားတွေကို လူမကြိုက်တော့လို့ကို ဆက်မရိုက်တော့ဘူးလို့ သိရတယ်။ ရှေးခေတ်မှာ စီးပွားရေးရုပ်ဘ၀ကိုလိုက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပေါ်လာခဲ့တဲ့ အမြင်ကို
Posted by zizawa | 02/07/2010, 14:44 Reply to this comment	ကိုပေါပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပိုဒ်ကလွဲလို့။ လောလောဆယ် တွေ့ရသလောက်တော့ အားကစား ပေါင်းလုပ်ရင် အမျိုးသမီးတွေ ကျန်ခဲ့မှာပါ။ စံချိန်တွေရှိပါတယ်။ Gender တူချင်းတောင် အချို့ အားကစားတွေ အတန်းခွဲရသေးတာပဲ။ (နောင်ကျ Body Weight နဲ့ Discriminate လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြဦးမလားမသိ။) ခွဲသင့်လို ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေလည်း ရှိပါတယ်။ (ဒါနဲ့စာရင် ကျနော်တင်ပြဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်ရင် ရည်းစားစကား စပြောသင့်တယ် ဆိုတာမျိုးက ဖြစ်ဖို့ ပိုနီးစပ်တယ်ထင်တယ်။ အဟဲ)
Posted by WinSg | 02/07/2010, 17:57 Reply to this comment	ဘောလုံးပွဲပြီးမှ လာရေးနိုင်တယ်..း)
ဒါနဲ့ ဒီနေရာမှာ ကိုပေါ ပြောပုံကို သိပ် ဘ၀င်မကျလှဘူး (မိတ်ဆွေရင်းကြီးမို့ အားမနာတမ်း နာမည်တပ်ပြောတာပါဗျို့)။ “အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ယောက်ျားမိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အတူပြိုင်ခိုင်းရင် ကောင်းမယ်ဗျ။ ပြေးတာတို့၊ အလေးမတာတို့၊ လက်ဝှေ့ထိုးတာတို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အလားတူပဲ ဂေါက်ရိုက်တာ၊ ဘောလုံးကန်တာ၊ တင်းနစ်၊ လှေလှော် စတာတွေမှာ အတူတူ မခွဲခြားဘဲ ပြိုင်ခိုင်းကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲဗျ။ သူတို့က ကိုယ့်ထက်သာချင်လည်း သာသွားမှာပေါ့။” ကိုပေါက ကျီစယ်နောက်ပြောင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အတည်သဘောနဲ့သာ ဆိုရင် ဒါက မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ သဘာဝအရ ကိုယ်ခနာအားဖြင့် အမျိုးသားတွေလောက် မကြံ့ခိုင်တာကို သိလျက်နဲ့ နိုင်ကွက်ကိုကိုင်ပြီး သက်သက်ရိသလို အရွဲ့တိုက်သလို ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒါဟာ အနိုင်ကျင့်ပြီး ပြောခြင်းတစ်မျိုးပဲ၊ အခွင့်အရေး တန်းတူ သဘောထားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင့်တော်သလို ကျင့်သုံးဖို့ပဲ လိုအပ်မှာပါ။ ၀င်ရိုးစွန်းအထိ ဆွဲမတွေးပါနဲ့။း) ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်တဲ့ ခွဲခြားမှုတွေကို ဖယ်ရှားတာရယ်၊ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ ဥာဏနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ စွမ်းဆောင်နိုင်သလောက် အရှိကိုအရှိအတိုင်း အသိအမှတ်ပြုဖို့ရယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေက ဆက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ တခြား issue တွေ ခေါင်းထဲမှာ ကျန်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆွေးနွေးနေကြတာ တယောက်ကို တယောက် ဖြည့်စွက်ရင်း အတော်အတန် စုံနေပြီမို့ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ တော်ကြာ ဒီအုပ်စုကို မူဝါဒရေးရာ အကြံပေးတွေ ဘာတွေ ခန့်ချင်နေပါဦးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်ဆရာတွေ ဆက်စဉ်းစားဖို့ ထားလိုက်ကြတာပေါ့။😛
Posted by ပန်ဒိုရာ | 02/07/2010, 17:42 Reply to this comment	I agree with every single word in the comment above by the reader “ပန်ဒိုရာ”, including the last paragraph.😀
Posted by ပိုင် (Pi) | 02/07/2010, 18:03 Reply to this comment	ဒီလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် ခင်ဗျ။
ဘိလိယက်တို့ ဂေါက်တို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ထွက်လာနိုင်တာက Chess လိုဟာမျိုးပါ။ သင်္ချာဘာသာရပ် နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အတူတူလည်း ရေပြင်ညီ ပြိုင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး သင်္ချာစွမ်းဆောင်ရှင်တွေ Chess ချန်ပီယံတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါသလား။ ဒီကိစ္စ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြတယ် ကြားတယ်။
Posted by WinSg | 02/07/2010, 18:20 Reply to this comment	Winsg ရေ.. ပြောပြီးသားပါ.. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရင် ပြောင်းစရာလိုတာ ပြောင်းပြီး မလိုတာကိုလည်း ထားလို့ရနိုင်ပါတယ် လို့။ အဲဒီအောက်မှာ ဒီအားကစား ကိစ္စတွေလည်း သင့်တော်ရင် သဘောတူရင် လုပ်နိုင်ကြပါမယ်။
Physical ကြံ့ခိုင်မှု ကိစ္စက အချက်အလက် (fact) တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောတာပါ။ ဒါက အမှန်တရားပါ။ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ- ကျားမတန်းတူမို့ ကိုပေါက လာ.. လက်သီးချိန်းထိုးကြစို့လို့ စိန်ခေါ်လာရင် ပန်ဒိုရာကတော့ အမိုက်မခံပါဘူး၊ ရှောင်ပြေးမှာပဲ။ အားနွဲ့တယ် ဆိုတာကတော့ အချက်အလက် (fact) ထက် သဘောထား (opinion) ဆန်သွားပါပြီ။ အားနည်းချက်လို့ မှတ်ယူတဲ့သဘော အားငယ်တဲ့သဘောပါ။ အဲဒီလို မဆိုလိုခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့် သူ့ကို ဒီလို ကောက်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။🙂
Posted by ပန်ဒိုရာ | 02/07/2010, 18:43 Reply to this comment	ပန်ဒိုရာ…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စကတည်းက အဲသလို ခွဲခြားမှုတွေဟာ ပင်ကိုယ်ဗီဇ သဘောသဘာဝ ကွာခြားမှု (ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ အားနွဲ့ခြင်း)ပေါ်ကနေ အစပြုလာတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ပြောချင်လို့ ကမ္ဘာဦးအစက အမဲလိုက်ခြင်း ဥပမာကနေ စရေးခဲ့တာပါ။ အခုခေတ်ကျမှ tools တွေ အကူအညီကြောင့်၊ လုပ်ငန်းသဘာဝအနေအထားတွေကြောင့် မိန်းမတွေလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ တန်းတူရည်တူ လုပ်နိုင်လာတဲ့ အနေအထား။ အဲသည်လိုအနေအထားမှာ သမိုင်းကြောင်းတခုလုံးကို ပြန်လှန်ပြီး ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေကို တလျှောက်လုံး နှိမ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ နည်းနည်း တဖက်သတ် ဆန်နေမလားလို့ ယူဆမိလို့ပါ။ စတင် ကွဲပြားလာခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်ကို လူတွေ မေ့နေကြဟန်တူလို့ ရေးပြခြင်းသက်သက်ပါ။ အခုခေတ်အလိုအရကတော့ ကျနော်လည်း တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတာတွေကို ထောက်ခံတဲ့သူပါ။ အခုခေတ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အရင်တုန်းက အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ဒါဟာ လိုအပ်ချက်အရ သူ့အလိုအလျောက် ကွဲပြားသွားခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ကျနော် ရဲ့ အပေါ်က စာပိုဒ်တွေမှာ ဆိုလိုချင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအထိတော့ ပန်ဒိုရာလည်း လက်ခံပုံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ကပဲ ရွဲ့ပြောသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ထောက်ပြစရာ ဖြစ်လာတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ရွဲ့ပြောတာလို့ အခုအမြင်နဲ့ ဆိုချင်ဆိုနိုင်ပေမယ့်…. တချိန်ကျရင် အခုလို အားကစားမှာ ခွဲခြားမိတာတွေဟာလည်း သမိုင်းကြောင်းနဲ့လှန်ပြီး လက်ညိုးထိုးစရာကြီး ဖြစ်လာဦးမှာကို မြင်ယောင်မိလို့ပါ။ အခုခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေလည်း တန်းတူရည်တူ ရင်ဘောင်တန်းပြီ စစ်မှုထမ်းတာတွေ၊ ဖိုက်တာ ပိုင်းလော့တ်တွေ၊ အာကာသလွန်းပျံယာဉ်မှူးတွေ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ စသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှာ နေရာယူလာနိုင်ကြပြီမဟုတ်လား။ အဖက်ဖက်က စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာတဲ့ သဘောပေါ့။
Posted by ကိုပေါ | 02/07/2010, 23:20 Reply to this comment	ဆောရီး…. အပေါ်မှာ Winsg ပြောတာကို ကိုဝတုတ်ပြောတာလို့ မှားရေးလိုက်မိတယ်။
Posted by ကိုပေါ | 02/07/2010, 23:27 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ရေ၊ မဆီမဆိုင် လက်ပံသားကို ဒါးနဲ့ဝင်ချိုင်တယ် သဘောထားပါဗျာ။ ကိုဘိုဘို face book မှာ သွားရေးမိတာကို ဆွဲလာပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 03/07/2010, 02:50 Reply to this comment	အချိန်တော်တော် နောက်ကျလို့ ကားလိပ်ချတဲ့ အချိန်ရောက်သွားပေမဲ့ Gender Equality Issue က ကျမ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့အကြောင်းမို့ နည်းနည်းလေး ၀င်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အရည်အချင်း မတူလို့ အမျိူးသမီးတွေက အထက်တန်းနေရာမရတာပေါ့ လို့ ပြောမဲ့အစား အဲဒီအရည်အချင်းမျိူး ပျိူးထောင်ဖို့ အခြေခံတန်းတူအခွင့်ကိုရော ရကြသလား လို့ အရင်မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်။ လေ့လာမိသလောက် တန်းတူမရကြတာ များပါတယ်။ မွေးကတည်းက သားနဲ့သမီးအပေါ် မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်က မတူကြပါဘူး။ (မိန်းကလေးပဲ သေစာရှင်စာတတ်ရင် တော်ပြီပေါ့ ဆိုတဲ့ အများစုကိုပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ ) အမြင်ပွင့်ပြီး အမျော်အမြင်ရှိတဲ့ မိဘများကို မဆိုလိုပါ။ ကာယကံရှင်မိန်းကလေးတော်တော်များများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း (အပေါ်က တော်တော်များများ ဆွေးနွေးခဲ့သလို) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် conceptualized/stereotyped လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတော့ကာ တန်းတူ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိတ်ပင်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အခြေခံအတွေးအခေါ်တွေကစပြီး ပြောင်းလဲမှရမယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာနဲ့ အားကစားပွဲမှာ တန်းတူပြိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့ (ခန္ဒာဗေဒ) နဲ့ ဆိုင်တာမို့ (လူမှုဗေဒ) ပြောတဲ့ စကားဝိုင်းထဲမှာ apple နဲ့ orange ရောထွေးသွားတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အသက်တွေ၊ အရပ်တွေတောင် ခွဲပြိုင်ရသေးတာ၊ ကျားနဲ့ မ လဲ ခွဲပြိုင်သင့်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးအတူတူ လိုချင်ရင် မိန်းမတွေလည်း ဆန်တစ်အိတ် အတူတူ ထမ်းနိုင်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်သလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုပေါပြောသလို ( အမည်တပ်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ) အမျိူးသမီးတွေ အဖက်ဖက်မှာ နေရရလာပြီ ဆိုတာလည်း တကယ်တမ်းက ကမ္ဘာ့လူဦးရေနဲ့ယှဉ်ရင် လက်တဆုပ်စာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အများကြီး လိုပါသေးတယ်။
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 03/07/2010, 08:13 Reply to this comment	Mamasusiemay,
Posted by zizawa | 03/07/2010, 08:57 Reply to this comment	နောက်တခုက ဘုရားအဖြစ်ကို မရခင်ကတည်းက သူ့တရားနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောနေသူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အရင် ဦးရွှေအောင် စာအုပ်တွေမှာ ဖတ်ဖူးတယ်လို့ မှတ်မိနေလို့ ပြောတာ။ ခုတော့ အနားမှာမရှိလို့ အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ ဦးဂိုအင်ကာတို့ရဲ့ VRI (Vipassan Research Institute) ကထုတ်တဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်မှာလည်း ဒီအချက်ကို အလားတူတွေ့လိုက်ရဖူးတယ်။ သေချာ မမှတ်မိပါ။ ဘုရားရဲ့greatest contribution to mankind ဆိုပြီး VRI ကပြောတဲ့ အချက်က အနုသယ ကိလေသာတွေကို အမြစ်ဖြတ်ဖို့ ဝေဒနာ sensation ကိုမရှုလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းပဲလို့ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်။
Posted by watote | 03/07/2010, 09:12 Reply to this comment	ဒီပို့ စ်တွေမှာ ဆွေးနွေးဘို့ ကို အစတော်တော်ရှာနေရတယ်
Posted by tint oo | 03/07/2010, 17:53 Reply to this comment	ဦးတင့်ဦးကို ကျွန်တော် မေးစရာ လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေမှာ ဦးတင့်ဦးက နှံ့စပ်ပုံရလို့ပါ။ ဘေးက စာဖတ်သူများထဲက သိသူများ ရှိရင်လည်း ဖြေသွားပေးကြပါ။
Posted by ပိုင် (Pi) | 03/07/2010, 19:30 Reply to this comment	http://www.lknt11.com/search/label/%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%B3%E1%80%94%E1%80%AE%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A7%E1%80%9A
Posted by tint oo | 03/07/2010, 19:46 အစဉ်အဆက် ထေရ၀ါဒအယူကတော့
Posted by tint oo | 03/07/2010, 19:51 Reply to this comment	ဆောရီး။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာ ကြောင့် စာလာမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ပိုစ့်မှာ ဖတ်ရတာ နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်နားလည်သလောက်က ဥပဒေအရတစ်ပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုအရ တစ်ပိုင်း ခွဲပြောဖို့ ကောင်းမယ်လို့ နားလည်ထားတာ။ အဲဒီတော့ ဥပဒေအရ ဘာတေ အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးမရအောင်ဘယ်လို ခွဲခြားထားလဲ ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး။ သိတဲ့လူရှိရင်ပြောပါဦး။ ပိုစ့်မှာ ရေးပြီးသားဆိုရင်တော့ နက်ဖြန်ည လာဖတ်မှ သေချာ ထပ်ကြည့်သွားပါမယ်။ ကောင်းသောည…။
Posted by အလှတရား | 03/07/2010, 20:02 Reply to this comment	သီလရှင်ကိစ္စ
Posted by tint oo | 03/07/2010, 20:03 Reply to this comment	တနေရာမှာ (ပြန်ရှာရမှာပျင်းလို့ ပါ ) တယောက်ကရေးတာဖတ်လိုက်ရတယ် ဦးဂိုအင်ကာရိပ်သာမှာ မိန်းမအသံနဲ့တိပ်မဖွင့်ချင်ဆိုတာကို တွေ့ ရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ။ ကျွန်တော်သိသလောက်က နောက်ပိုင်းရိပ်သာတွေလျော့ရဲတာဘဲသိတယ်။ခုလို ကပ်သီးကပ်သပ်စည်းကမ်းလေးတောင်သိတဲ့ သူ ရိပ်သာဦးဆောင်သူထဲရှိသေးတာ သိတော့ ၀မ်းသာမိတာ အမှန်ဘဲ ၊
Posted by tint oo | 03/07/2010, 20:29 Reply to this comment	ဘုရားက ချစ်သား ပါရာဇိက(တသက်လုံးရဟန်းပြန်မဖြစ်သော အပြစ်) တော့မဟုတ်ဘူး ။ အကောင်ပျက်ပုတ်ပွနေသော အလောင်းကောင်မှာမေထုံမှုပြုမိက ထုလ္လဇင်းအာပါတ(သံဃာထံမိမိအပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်အပ်သောအပြစ် ) ဖြစ်တယ် ။ အရိုးစုမှာ မေထုံပြုမိက ဒုကိုဋ်အာပတ်ဖြစ်တယ် ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်
Posted by tint oo | 03/07/2010, 20:43 (ဒါကြောင့် ၀ိသုဒ်ဓိမဂ်ဆရာက အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အရိုးစုမရှုရာလို့ ဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မိန်းမသံဖြစ်လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ယောက်ျားများ မနာထိုက်။ ယောက်ျားသံကို မိန်းမတွေ နာရင်ရော …။ (မိန်းမတွေကတော့ ယောက်ျားတွေကို အသံကြားရုံလောက်နဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်)😀
Posted by Rita | 04/07/2010, 13:13 အသုဘ ကမ္မဌာန်း ရှုသူ ရဟန်း ဖောက်ပြားမှုအကြောင်း ယခင်ဖတ်ဖူးပေမယ့် အခု ဦးတင့်ပြောမှ သေချာပြန် အမှတ်ရလာပါတယ်။
Posted by Nanda | 04/07/2010, 19:44 ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးတင့်ဦးရေ။ ဘိက္ခုနီသာသနာ အကြောင်း ပိုပြီး သိလိုက်ရလို့ပါ။
Posted by ပိုင် (Pi) | 04/07/2010, 20:41 (၁) ဥပဒေမှာ ခွဲခြားထားတဲ့ အချက်တွေ ရှိသလား။
Posted by အလှတရား | 03/07/2010, 20:05 Reply to this comment	@TinOo ‘တယောက်ကရေးတာဖတ်လိုက်ရတယ် ဦးဂိုအင်ကာရိပ်သာမှာ မိန်းမအသံနဲ့တိပ်မဖွင့်ချင်ဆိုတာကို တွေ့ ရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ။ ကျွန်တော်သိသလောက်က နောက်ပိုင်းရိပ်သာတွေလျော့ရဲတာဘဲသိတယ်။ခုလို ကပ်သီးကပ်သပ်စည်းကမ်းလေးတောင်သိတဲ့ သူ ရိပ်သာဦးဆောင်သူထဲရှိသေးတာ သိတော့ ၀မ်းသာမိတာ အမှန်ဘဲ ၊’
ဒီလို စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကမ္ဘာပြန့်အောင် လုပ်နိုင်မယ် ထင်ရင်တော့ အဲဒိအထင်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဦးလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ ၀တုတ်
Posted by watote | 03/07/2010, 23:37 Reply to this comment	အဲဒါစထဲက ၀တုတ်ကိုမေးနေတာဘဲလေ ။
Posted by tint oo | 04/07/2010, 05:12 Reply to this comment	အင်း ဘယ်ဘာသာ အယူဝါဒဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်ရမယ် လို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယုံသည်ဖြစ်စေ မယုံသည်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာက ကွန်မြူနစ်ဝါဒထက်တော့ သက်တမ်းရှည်တယ် ခင်ဗျ။ ပိုလည်း သက်တမ်း ရှည်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိတယ်ခင်ဗျ။ တကမ္ဘာလုံးကို အတော်များများ ပြန့်ပွားမယ်လို့ အယူအဆရှိခဲ့တဲ့ အလွန် rational ဖြစ်ဟန်တူတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒသာ စောစောစီးစီး နိတ္ထိတံ သွားတာ မဟုတ်လား။ အဲ ဆောရီး… အားပျော့သွားတာလုိ့ ယူချင်လည်း ယူပါ။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းမှာ ကျင့်ဝတ်တွေ အများစုဟာ ၁၈ ရာစုလောက်မှ စပြီး အသံကျယ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ ကိုက်ပြီး မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ထုတ်ပြောစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ မိန်းမတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအားနည်းနေတယ် ပြောရင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအားသာနေတယ် ပြောရင် မရိုးသားမှု၊ ဒါမှမဟုတ် ပရိုပဂန်ဒါလို့ ဆိုချင်လည်း ဆိုနိုင်မယ်၊ (ဒီပိုစ့်ရေးတဲ့သူရေးခဲ့ဖူးတယ်။ )ဟုတ်စ…။ ဒီတော့ ပိုစ့်ရေးသူက ဗမာဓလေ့ထဲက မိန်းမတွေဆိုတာနဲ့ ဆိုးတာရော ကောင်းတာရော ရေးဖို့ မလိုပေဘူးလား။ တမင်သက်သက် ချန်ထားခဲ့တာဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေ ရေးဖို့အခွင့်ပေးရလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို ပြောတာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီး အယောင်ပြပြီး ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာတရားကို ဆော်ဖို့ချောင်းနေတဲ့လူတွေ ဒုနဲ့ဒေး မဟုတ်လား။ ခုကို နက်ထဲ အများကြီးတွေ့နေရတာ။ အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ မြန်မာလူမျိုးစိတ်ဓာတ်က ရှင်းပါတယ်။ အထီးကျန်တယ်။ မဖွံ့ဖြိုးဘူး။ ကွန်ဆာဗေးတစ်များမယ်။ မာန်မာနကြီးတယ်။ အဟောင်းတွေကိုလည်း ချစ်နေတုန်းပဲ။ အဲဒီတော့ မျှမျှတတ ပြောနိုင်တဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့လူမျိုး ယုံကြည်ရတဲ့လူမျိုးကလည်း ပညာတတ်ထဲမယ်တောင် ခပ်ရှားရှားဆိုတော့ …
Posted by အလှတရား | 04/07/2010, 04:32 Reply to this comment	အဓိကပြောနေတာက ဗမာ့ဓလေ့ထုံစံထဲမှာ မိန်းမတွေဟာ တချို့စာရေးဆရာတွေ၊ ပညာရှင် အမည်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ romanticize လုပ်သလိုမဟုတ်ဘဲ တန်းတူဆက်ဆံမခံရဘူး၊ နေရာပေးမခံရဘူး ဆိုတာပြောနေတာ။ ဒါကိုမှ နားမလည်သေးဘူး၊ မမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် နောင်ရေးမဲ့ အခန်းတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေလည်း နားလည်နိုင်မဲ့ပုံ မရှိဘူး။ ခင်ဗျားတို့လို လူမျိုးဆီကလည်း meaningful contribution ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး။ ကိုယ်မငြင်းနိုင်လို့ ဟိုဟာပြဦး၊ ဒီဟာပြဦးလို့ အောက်ကလိအာနေတာလို့ပဲ မြင်တယ်။ Posted by zizawa | 04/07/2010, 05:47 Reply to this comment	ဥပဒေရှုထောင့်ကို သုံးသပ်ပေးပါလို့ ပြောတာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်စိတ်တိုနေရတုန်းဗျ။ ခင်ဗျားပြောတာကို နားလည်တာမလည်တာ အသာထား။ ခင်ဗျားပိုစ့်တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို ထောက်ပြလိုက်တာ ကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးလား။
Posted by အလှတရား | 04/07/2010, 20:17 ကျွန်တော် အဲဒီတစ်ခွန်းပြောတာဟာ ပိုစ့်ရေးသူကို ဘာမှထိခိုက်ပြောဆိုတာမပါဘူး။ ဗမာဓလေ့ထဲက မိန်းမတွေဆိုတာနဲ့ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဥပဒေရှုထောင့်ကို မျှော်လင့်မိတာပဲ။ ပိုစ့်ရေးသူမှ မရေးထားတာပဲ။ သိတဲ့လူဆီက ဗဟုသုတတွေ တောင်းတယ်။ အဲတော့ ခင်ဗျားရဲ့ စော်ကားမှုအတွက် တောင်းပန်မယ်ဆိုလည်း ကြေပါတယ်။ မတောင်းပန်ရင်လည်း သဘောအတိုင်းပါပဲ။ စိတ်ဆိုးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မူအရ ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အလှတရား | 04/07/2010, 20:31 (အလှတရား သို့)
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 04/07/2010, 05:23 Reply to this comment	ကျွန်တော်က ဒီလောက်အငြင်းပွားစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စကို ၀င်ငြင်းဖို့ စိတ်မပါသေးပါဘူးခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် အချို့အချက်တွေကို ထောက်ပြရုံလောက်ပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အစွန်းလေးတွေကို တင်းပုတ်ကလေးတွေနဲ့ ထုပြီး တိပေးရုံကလွဲရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းခုံခဲ့တာလည်း မရှိပါဘူး။ trap လို့မြင်ပြီး ကြိုပိတ်သွားတာတွေ့ရလို့ ပြုံးတောင် ပြုံးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တလေးတစား ဆွေးနွေးသွားတဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by အလှတရား | 04/07/2010, 20:42 Reply to this comment	အပေါ်မှာ ဦးတင့်ဦးပေးထားတဲ့ “ဘိက္ခုနီ ၀ိနိစ္ဆယ ”ကို သွားဖတ်ကြည့်မိတယ်။ အဲသည်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ဘာကြောင့် ဘိက္ခုနီလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာကို စနစ်တကျ စာတမ်းနဲ့ ရှင်းပြ၊ သုံးသပ်ပြထားတာကို (အပေါ်မှာ ဦးတင့်ဦးလည်း အကျဉ်းချုပ် ပြန်ထုတ်ပြထားပါတယ်။) တွေ့ရတယ်။ ကျနော့်အဖို့တော့ အဲဒီအကြောင်းတွေကို အရင်က သိလည်း မသိဘူး။ အခုသိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂေါတမီ ဆီက စံယူရမှာက တချို့အခွင့်အရေးတွေက အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် တောင်းယူ၊ တိုက်ယူရမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ မိထွေးတော်ဂေါတမီရဲ့ မဆုတ်မနစ်တဲ့ လုံ့လကို အတုယူရမယ်။ တချို့သော တံခါးတွေကျတော့ ဖွင့်ထားပြီးသားတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အသာတွန်းဖွင့်ပြီး လျှောက်သွားဖို့ပဲ လိုမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖွင့်ထားမှန်းမသိတဲ့အခါ အတွင်းက သော့ခတ်ထားလေသလားဆိုပြီး တံခါးရှေ့မှာ အကြာကြီး ရပ်စောင့်နေတတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ | 04/07/2010, 06:01 Reply to this comment	“အဲဒီမှာ မိထွေးတော် ဂေါတမီကို ကျနော်ချီးမွမ်းတယ်။ (တကယ်ချီးမွမ်းတာ။ ဒီတခါ ငေါ့ပြောတာမဟုတ်)။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် အရင်ဆုံး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးကြီးတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေးမိလို့ပါ။။
Posted by WinSg | 04/07/2010, 18:24 Reply to this comment	“ဘိက္ခုနီ ၀ိနိစ္ဆယ” ဟာ ထေရဝါဒ အခြေခံအရ မှန်တယ်လို့ မြင်သာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင် ကျနော်တို့က မြန်မာပြည်က ဖြစ်တဲ့အတွက် ထေရဝါဒလို့ ယေဘူယျ သဘောထားပြီး ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထေရဝါဒတစ်ခုသာ ရှိတာမဟုတ်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ဂိုဏ်းဂဏ အဖွဲ့အစည်း ကိစ္စက တွဲပါလာပါပြီ။
Posted by WinSg | 04/07/2010, 18:22 Reply to this comment	WinSg ကို တခုလောက် မေးပါရစေလားခင်ဗျာ။ သူ့မေးပေမယ့် သိတယ်လူ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ WinSg က ဂျိန်းဘာသာက ဗုဒ္ဓဘာသာထက် စောတယ်ဆိုပြီး ခုနှစ်သက္ကရာဇ်နဲ့ပါပြောလာတော့ ပိုတောင်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဂျိန်းဘာသာဆိုတာ ပါဠိလို ဂျိန (ဗမာလိုတော့ ဇိန) လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။ တခါဘုရားကို ဗုဒ္ဓ၊ ဘဂ၀ါ၊ ဇိန စသဖြင့် ခေါ်ကြတယ်။ ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်ရဲ့ဇိနထ္ထပကာသနီကျမ်း စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒိ ဇိနထ္ထပကာသနီကျမ်းခေါင်းစဉ်က ဇိန၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိဒတ္တဂေါတမကို ရည်ညွှန်းတဲ့ ဇိနက ဂျိန်းဘာသာက ဇိနနဲ့ တနည်းတဖုံ ဆက်စပ်နေမလား။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်တော်တော့ အသည်းယားလာပြီ။ မြန်မြန် ဖြေပေးပါဗျို့ ။
Posted by zizawa | 04/07/2010, 19:08 Reply to this comment	ဇိနထ္ထပကာသနီကျမ်းခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ မသိပါခင်ဗျား။ သိသူများရှိရင် ပြောစေချင်ပါတယ်။
Mahāvīra and Buddha were contemporaries. The Pali Canon does not record that the two teachers ever met, though instances of Mahavira’s disciples questioning Gautama Buddha are to be found in various suttas. The Buddhists have always maintained that by the time Buddha and Mahavira were alive, Jainism was already an entrenched faith and culture in the region. Buddhist scriptures attest that some of the first Buddhists were in fact Jains (Nirgranthas as they were then called, meaning “the unbonded ones”) who “converted”, but were encouraged by Buddha to maintain their Jain identity and practises such as giving alms to Jain monks and nuns.
Posted by WinSg | 04/07/2010, 19:58 ဒီကွန်မန့်တွေကိုကြည့်ပြီး ဗုဒဘာသာနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အငြင်းပွားဖွယ်များကိုလည်း ဗဟုသုတမစုံလင်သူဖြစ်သဖြင့် ၀င်မဆွေးနွေးနိုင်ငြား သဘောတကျ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ပါသည်။
Posted by KNSL | 05/07/2010, 09:38 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့ KNSL ရဲ့ အဲဒီဥပဒေကိစ္စက မှန်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက ကာယအိနြေ္ဒပျက်ပြားစေမှု၊ လင်စားရိတ်တောင်းခံခွင့်၊ စသည်ဖြင့် ရှိပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာက အဲဒီဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေတွေဟာ ခောတ်နဲ့ လိုက်ပြီး ပြုပြင် ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုမြောက်တဲ့ ကိစ္စတွေကျတော့ ပြောင်းလဲရတာ ပိုမိုခက်ခဲတယ်ထင်တယ်။ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများ ဝင်ပြောကြရင် ပိုကောင်းမယ်။
Posted by WinSg | 05/07/2010, 10:12 Reply to this comment	ဒီကွန်မန့်တွေကိုကြည့်ပြီး ဗုဒဘာသာနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အငြင်းပွားဖွယ်များကိုလည်း ဗဟုသုတမစုံလင်သူဖြစ်သဖြင့် ၀င်မဆွေးနွေးနိုင်ငြား သဘောတကျ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ပါသည်။
Posted by KNSL | 05/07/2010, 09:40 Reply to this comment	i think KNSL is an expert in law. we should consult her.
Posted by watote | 06/07/2010, 13:02 Reply to this comment	ကိုဝတုတ် ဒါ…အချွန်နဲ့မတာပဲ ဘာမကျေနပ်တာရှိလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ…ညီမက ကိုဝတုတ်တို့ကို သိပ်လိုက်မီတာမဟုတ်ဘူး..:D
Posted by KNSL | 07/07/2010, 10:49 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...